Axsaabta Mucaaradka oo kulan ay Hargeysa kula yeesheen Safiir ku-xigeenka Addis u fadhiya Dalka Britain uga warramay mawqifkooda Shirka London | Building Momentum
Axsaabta Mucaaradka oo kulan ay Hargeysa kula yeesheen Safiir ku-xigeenka Addis u fadhiya Dalka Britain uga warramay mawqifkooda Shirka London
Hargeysa, 01, February 2012 (Moment Media)- Masuuliyiinta Axsaabta mucaaradka ah ayaa ka warbixiyay kulan ay maanta la yeesheen Safiir ku-xigeenka dalka Ingiriiska u fadhiya Itoobiya oo sannadkan bilawga ah markii Somaliland socdaal ku yimi si uu ugu maslaxo ka qaybgalka shirka Soomaalida loogu qabanayo magaalada London.
Masuuliyiinta axsaabta mucaaradka oo hotel Maansoor kula kulmay Safiir ku-xigeenka ayaa mawqifyo isku dhaw iska taagay ka qaygalka Somaliland ee shirka Soomaalida.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo ugu horeyn ka hadlay mawqifkooda xisbi ahaan ee shirkaas ayaa yidhi. “Anagu UCID ahaan waxaanu nidhi shirka London halaga wada tashado, halkaa waxa imanaya maamul gobolleedadii yar yaraa ee Puntland ka mid ahayd, Galmudug, Ahlu Sunna iyo TFG, marka waxyaabaha ka dhiman dawladda Ingiriisku ay soo gudbiso waa in la isku yimaadaa.”
Siciid Sulub Maxamed oo ka mid hogaanka sare ee Xisbiga UDUB ayaa tilmaamay inay Safiir ku-xigeenka u sheegeen in shirka London aanay Somaliland wax dan ahi ugu jirin, isla markaana aanay ka qaybgalayn. “Waxaanu u sheegnay Safiir ku-xigeenka dalka Ingiriiska ee Itoobiya waxaanu u sheegnay mawqifkayaga ku wajahan shirka Soomaaliya loogu qabanayo dalka Ingiriiska, waxaananu u sheegnay inaananu tagayn meel aanay anaga dani noogu jirin, isla markaana aanaan ka mid ahayn maamul gobolleedyadda ama Soomaaliya.” ayuu yidhi Siciid Sulub.
Waxa kale, oo ka hadlay kulankaas Axmed X. Daahir iyo Cabdi Haybe waxaanay tilmaameen inay safiir ku-xigeenka u sheegeen inaanay Somaliland ka qaybgalayn shirkaas.